The Goddess of Revenge (2020) Complete – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Channel M-Sub Android App မှ Vip Subscribe လုပျနညျး
Created byKim Hyo-Jin
StarringJang Yoo-sang, Jeong Man-sik, Jung Eui-Jae, Jung Hyeon-jun, Jung Wook, Kim Sa-rang, Park Eun-hye, Yoo Sun, Yoon Hyun-min, Yoon So-Yi
Synopsis of The Goddess of Revenge (2020) Complete
ငယျငယျလေးကတညျးက မိသားစုကိုထောကျပံ့ပေးနရေတဲ့ Kang Hae Ra (Kim Sa Rang) တဈယောကျ သူမဘဝရဲ့ ကံကောငျးခွငျးတဈခုအနနေဲ့ နိုငျငံကြျော cele တဈယောကျနဲ့လကျထပျဖွဈခဲ့ပါတယျ
မထငျမရှားသူမနဲ့ နိုငျငံကြျော celebrity တို့လကျထပျကွတော့ တဈနိုငျငံလုံးက Hae Ra ကို အာရုံစိုကျလာကွတော့တာပါ
ဒါပမေယျ့ အာဏာနဲ့ငှကွေေးက ပထမဘုရားသခငျဖွဈနတေဲ့ လောကမှာ အရှုပျတျောပုံတဈခုထဲ ပါမိပွီးတဲ့နောကျ သူမဘဝက ဇောကျထိုးမိုးမြှျောဖွဈသှားတော့တာပါပဲ Hae Ra တဈယောကျ သူမဘဝကို ဒီလိုဖွဈအောငျလုပျတဲ့သူကိုလကျစားခဖြေို့အခှငျ့အရေးကို ရှာနတေဲ့အခြိနျ ….
အမှုတဈခါမှမရှုံးဖူးသေးတဲ့ အေးစကျစကျနတေတျတဲ့ ရှနေ့ေ Cha Min Joon (Yoon Hyun Min) သူ့မိသားစုဘဝလေးကို တဈစုံတဈယောကျက ဖကျြစီးလိုကျတဲ့အခါ
အဲ့ဒီတဈစုံတဈယောကျကို လကျစားခဖြေို့ Min Joon တဈယောကျ အခှငျ့အရေးကိုရှာဖှနေတေဲ့အခြိနျ …
Kim Tae On (Yoo Sun) ဆိုတဲ့ FB Group ကုမ်ပဏီပိုငျရှငျလောငျးလြာလေးကုမ်ပဏီပိုငျရှငျ ဖွဈဖို့ကိုယျ့မိဘကို ပွနျယှဉျပွိုငျရမယျ့အခွအေနမှော သူမအနနေဲ့ နရောတညျမွဲဖို့ အခှငျ့အရေးကိုရှာဖှနေတေဲ့အခြိနျ …
ဒီလို လကျစားခလြေိုမှုတှေ နောကျကြောဓါးထိုးလိုမှုတှနေဲ့ ပွညျ့နှကျနတေဲ့ သူတို့တှရေဲ့လမျးကွောငျးတှေ တဈခုနဲ့တဈခု ဖွတျမိကွတဲ့အခါ ….
စုံထောကျမလေး Ku Eun Hye (Yoon So Yi) တဈယောကျ အမှုတဈခုကို အစဆှဲထုတျရငျးနဲ့ မမြှျောလငျ့ပဲသူတို့တှအေခငျြးခငျြးပတျသကျဖို့အကွောငျးဖနျလာပါတော့တယျ။
ငယ်ငယ်လေးကတည်းက မိသားစုကိုထောက်ပံ့ပေးနေရတဲ့ Kang Hae Ra (Kim Sa Rang) တစ်ယောက် သူမဘဝရဲ့ ကံကောင်းခြင်းတစ်ခုအနေနဲ့ နိုင်ငံကျော် cele တစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
မထင်မရှားသူမနဲ့ နိုင်ငံကျော် celebrity တို့လက်ထပ်ကြတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးက Hae Ra ကို အာရုံစိုက်လာကြတော့တာပါ
ဒါပေမယ့် အာဏာနဲ့ငွေကြေးက ပထမဘုရားသခင်ဖြစ်နေတဲ့ လောကမှာ အရှုပ်တော်ပုံတစ်ခုထဲ ပါမိပြီးတဲ့နောက် သူမဘဝက ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ Hae Ra တစ်ယောက် သူမဘဝကို ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူကိုလက်စားချေဖို့အခွင့်အရေးကို ရှာနေတဲ့အချိန် ….
အမှုတစ်ခါမှမရှုံးဖူးသေးတဲ့ အေးစက်စက်နေတတ်တဲ့ ရှေ့နေ Cha Min Joon (Yoon Hyun Min) သူ့မိသားစုဘဝလေးကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ဖျက်စီးလိုက်တဲ့အခါ
အဲ့ဒီတစ်စုံတစ်ယောက်ကို လက်စားချေဖို့ Min Joon တစ်ယောက် အခွင့်အရေးကိုရှာဖွေနေတဲ့အချိန် …
Kim Tae On (Yoo Sun) ဆိုတဲ့ FB Group ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်လောင်းလျာလေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဖြစ်ဖို့ကိုယ့်မိဘကို ပြန်ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့်အခြေအနေမှာ သူမအနေနဲ့ နေရာတည်မြဲဖို့ အခွင့်အရေးကိုရှာဖွေနေတဲ့အချိန် …
ဒီလို လက်စားချေလိုမှုတွေ နောက်ကျောဓါးထိုးလိုမှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ သူတို့တွေရဲ့လမ်းကြောင်းတွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဖြတ်မိကြတဲ့အခါ ….
စုံထောက်မလေး Ku Eun Hye (Yoon So Yi) တစ်ယောက် အမှုတစ်ခုကို အစဆွဲထုတ်ရင်းနဲ့ မမျှော်လင့်ပဲသူတို့တွေအချင်းချင်းပတ်သက်ဖို့အကြောင်းဖန်လာပါတော့တယ်။
Airs OnTV Chosun
Firt air date2020-11-21
Last air date2021-01-17
Home PageThe Goddess of Revenge (2020) Complete